अभिनेता रणवीरको अँगालोमा बेरिएकी यि सुन्दरी को हुन् ? किन पायो यो तस्बिरले चौतर्फि चर्चा ? – Classic Khabar
September 2, 2021 89
बलिउड अभिनेता रणवीर सिंहको एउटा तस्विर सामाजिक संजालमा भाइरल भएको छ । उक्त तस्विरमा उनि एक महिला सँग अगालोमा बाधिएका छन् । तस्विरमा रणवीरको कपाल लामो लामो र फरक फेश देखिएको छ ।
तर धेरै दर्शकको मनमा चासो पस्न सक्छ उनको अगालोमा बाधिएकी युवति को हुन् भनेर उक्त तस्विरमा देखा परेकी युवति प्रिया त्रिदेवी रहेकी छिन् । प्रिया धेरै फिल्ममा अभिनय गरेकी छिन् । उनले १५ वर्षको उमेरबाटनै आफ्नो करयिर अगाडि बढाएकी हुन् ।
यो पनि, अभिनेत्री तथा टेलिभिजन प्रस्तोता शिवानी डान्डेकरले आफ्नो शरीरमा प्रेमी तथा बलिउड अभिनेता तथा निर्देशक फहरान अख्तरको ट्याटू खोपेकी छिन् । जन्मदिनको उपहारको रुपमा शिवानीले फहरानको नामको ट्याटू आफ्नो घाँटीमा बनाएकी हुन् ।
उनले नयाँ ट्याटूको तस्विर सामाजिक सञ्जाल इन्सटाग्रामको स्टोरीमा सेयर गरेकी थिइन् । ट्याटू बनाउने मिस्टर केले पनि उक्त फोटो सेयर गर्दै फहरान र शिवानीलाई ट्याग गरेका छन् । आफू ४२ वर्ष पुगेको अवसरमा शिवानीले फहरानको नामको ट्याटू बनाएकी हुन् । उता, फहरानले पनि इन्सटाग्राममा दुई जनाको तस्विर सेयर गर्दै जन्मदिनको शुभकामना दिएका छन् ।
शिवानी र फरहान पछिल्लो तीन वर्षदेखि डेट गरिरहेका छन् । गत फेब्रुअरी २१ मा सम्बन्धनको तीन वर्ष पुरा भएको दुवैले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएका थिए । फरहानले यसअघि हेयरस्टाइलिस्ट अधुना भबानीसँग विवाह गरेका थिए । उनका दुई सन्तान पनि छन् ।
Prevपहिरोले घर बगाउँदा एक दम्पतिसहित तीन जनाको मृत्यु
Nextअमेरिकाको न्युयोर्क र न्यु जर्सीमा बाढी, आपतकालीनको घोषणा, ९ जनाको मृत्यु